Samsun'da Ulaşıma Zam Yapılacak Ama Minimum Miktarda | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
[04 / 11 / 2019] တူရကီစက်မှုလုပ်ငန်း 5-10 ယူရိုသန်းပေါင်းများစွာပို့ကုန်တင်ပို့မှုသည်ယူရိုဘီလီယံနှင့်ရထားများနိုင်ငံခြားသားများကိုသွားသည်	06 တူရကီ
[04 / 11 / 2019] Konya မြေအောက်ရထားပေါ်တွင် Bursa Metro စီမံကိန်းများစောင့်ဆိုင်းနေဆဲဖြစ်သည် 16 Bursa
[04 / 11 / 2019] Bursa မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်းသည် ၀ န်ကြီးများကောင်စီ၏အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သည်	16 Bursa
[04 / 11 / 2019] Gaziray ဘူတာမှာပျက်သွား!	27 Gaziantep
[04 / 11 / 2019] မီးရထားလမ်းသည် 50 နှစ်အတွက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်	26 Eskisehir
[04 / 11 / 2019] Bolu ပြည်သူ့အများဆုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသုံးစွဲ	14 Bolu
[04 / 11 / 2019] အများပြည်သူသုံးဘတ်စ်ကားများကို Istanbul Metropolitan Municipality မှရှင်းလင်းချက်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[04 / 11 / 2019] နိုဝင်ဘာလတွင်တရုတ်နိုင်ငံမှဥရောပသို့6သို့ပထမဆုံးတင်ပို့မည့်ရထား	06 တူရကီ
[04 / 11 / 2019] အဆိုပါသံပိုးလမ်းမကြီး၏ပထမဦးဆုံးမီးရထားတူရကီအတွက်ပွဲထွက်ခဲ့ပြီး	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[04 / 11 / 2019] TÜVASAŞသည် National Train Project တွင် 12 အင်ဂျင်နီယာများကိုစုဆောင်းနေသည်။	54 Sakarya
16 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 55 Samsun, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, ဓါတ်ရထား 0
Samsun Metropolitan Municipality အစည်းအဝေးတွင် 44 ကိုတညီတညွတ်တည်းမဲဖြင့်လက်ခံခဲ့ပြီး 42 ကိုအများစုမဲဖြင့်လက်ခံခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလ 2019 ရှိ Samsun Metropolitan Municipality 22 ။ 1 ၏ပေါင်းစပ်။ ထိုအစည်းအဝေးကိုသမ်မွန်မြို့တော်စည်ပင်၏မြို့တော်ဝန် Mustafa Demir ကသဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ 44 အစီအစဉ်ကို 42 အစီအစဉ် item မှတညီတညွတ်တည်းအတည်ပြုပြီး2အစီအစဉ်ကိုအများစုမဲဖြင့်အတည်ပြုခဲ့သည်။ သမ္မတမူစတာဖာဒီမирကလည်းဆမ်ဆန်သို့အရှိန်မြှင့်ခြင်းအကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
2020-2024 နှစ်အလိုက်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအဆိုပြုလွှာနှင့်စပ်လျဉ်း။ မြို့တော်ဝန် Mustafa Demir မှပြောကြားသည်မှာızကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဤတွင်ခရိုင်မြို့တော်ဝန်များသည်လည်းအနီးကပ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိကြသည်။ ငါတို့အတူတူအလုပ်လုပ်ကြ ကျွန်ုပ်တို့အောင်မြင်နိုင်ပါကသမ္မတအစိုးရစနစ်ပြီးနောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တောရေးရာ ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်ပူးပေါင်းရန်လမ်းကြောင်းရှာလိမ့်မည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့်စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းများထုတ်လုပ်ရန်နေရာများစွာရှိပါကကျွန်ုပ်တို့စီမံကိန်းများကိုထုတ်လုပ်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိုင်မြူနီစီပယ်ဤစီမံကိန်းများအတွက်ပေါင်းစည်းပါလိမ့်မယ်။ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနေရာတွင်အဓိကပြောင်းလဲမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့လက်မှတ်ထိုးပါမည်။ ဆမ်ဆန်သည်လျင်မြန်စွာတိုးပွားလာသောယာဉ်ကြောသိပ်သည်းဆနှင့်အတူလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးဆဲမြို့ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ အသွားအလာသည်ပြင်းထန်သောသိပ်သည်းမှုများကိုကြုံတွေ့ရသည်။ ဤအခြေအနေတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သိပ်သည်းဆနှင့်အသွားအလာကိုထိန်းညှိရန်အလေးအနက်ကြိုးစားရမည်။ နိုင်ငံသားအားလုံးမိမိတို့သွားလိုရာခရီးကိုအထိရောက်ဆုံးနှင့်အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်သွားမည်။ ဒီအတွက်ကျနော်တို့လိုအပ်တာမှန်သမျှကိုလုပ်ပြီးအမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေကိုလုပ်ပါမယ်။ ”
မြို့တော်ဝန် Demir ကသမ္မွန်တွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူကပြောကြားသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်SAMULAŞအားအရင်းအနှီးတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ဘဏ္theာရေးအရဖယ်ရှားပစ်မည်ဖြစ်ပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိမှု၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်မှုတို့အတွက်လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ SAMULAŞသည်ရထားလမ်းနှင့်ဘတ်စ်ကားနှစ်မျိုးလုံးကိုလက်ရှိလည်ပတ်နေသည်။ သူသည်လမ်းကြောင်းများနှင့်ပတ်သက်သောဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းသည်အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ကျနော်တို့စုစုပေါင်းလေ့လာမှုလုပ်နေတာ။ ဤလုပ်ငန်းများကိုဒီဇင်ဘာလတွင်သင်နှင့်မျှဝေမည်။ SAMULAS သည်အရင်းအနှီးဖြင့်အားဖြည့်ထားခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်း၏ကီလိုမီတာရှိသောစနစ်တစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်နေသည်။ ကြော်ငြာကိုလည်းလုပ်နေတယ်။ UKOME'de မြှင့်တင်ရေးတွင်လည်းဤကဲ့သို့သောလေ့လာမှုမျိုးရှိသည်။ လုပ်ဖို့မကဲ့သို့သောအရာရှိပါသည်။ လောင်စာဆီစျေးနှုန်းနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အခြားဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုလူသိများကြသည်။ ၎င်းသည် SAMULA of အတွက်စိုးရိမ်စရာကိစ္စမဟုတ်ပါ။ ဆမ်ဆမ်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနေရာ၊ မီနီဘတ်စ်ကားများ၊ ဘတ်စ်ကားများနှင့်ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်လေ့လာမှုတစ်ခုရှိပါသည်။ ကျနော်တို့ကသူနဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်ထားတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုနိမ့်ကျအောင်လုပ်ဖို့ကျနော်တို့အများကြီးကြိုးစားနေတယ်
Bilecik နှင့်Bozüyükeတင်ဒါဖွစျလိမျ့မညျထုတ်ပေးပေမယ့်အလျင်အမြန်ဘူတာရုံလေ့ကျင့်ခံခဲ့ရ 16 / 05 / 2013 Bilecik ve Bozüyüke yapılacak hızlı tren gar ihalesi yapıldı ama : Ankara- İstanbul arası hızlı tren projesi kapsamında Bilecik ve Bozüyük’e yapılaması planlanan gar ihaleleri yapıldı.9Mayıs Perşembe günü…
Trabzon မီးရထားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆွဲဆောင်မှုများအချိန်မှသို့သော်မအချို့ 15 / 05 / 2013 Trabzona မီးရထားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြီးစီးလိမ့်မည်သို့သော်အချိန်ကိုမူမသတ်မှတ်ရသေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ရေကြောင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီး Yahya Baş၊ သူတို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ Trabzon သို့ရထားလမ်းလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။
ဓါတ်ရထား - မြေအောက်အရာတစ်ဦးကနှိပ်စက်ခံရသူသို့သော်မီနီဘတ်စ် Be မှ 03 / 06 / 2015 Tramvay - Metro Yapılacak Ama Minibüsçüler Mağdur Olmayacak :Geçtiğimiz hafta Pazarcı esnafı ile buluşup Doğu Kışla’ya Pazar müjdesi veren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, bugünde Kocaeli Minibüsçüler ve…
high-speed ရထားလာနိုင်ဘူး, ဒါပေမယ့်ခဲ Gemlik ကုန်တင်ရထားအောက်မှာဒါGündoğdu'nunဥမင်လိုဏ်ခေါင်းလုပ်ဖို့ 08 / 04 / 2017 Hızlı tren gelemedi, ama Gemlik yük treni için Gündoğdu’nun altından Kurşunlu’ya kadar tünel yapılacak :Gerçi… Tünellerde kalan Bursa-Yenişehir etabı ile projesi yeni tamamlanan Yenişehir-Bilecik etabında tıkanmış olsa da Bursa’nın hızlı…
အဆိုပါရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးဂျာမနီမှာထမြောက်ကြလိမ့်မည် 28 / 09 / 2012 ဂျာမန်မီးရထား (DB) နှင့်ကုန်တင်ကုန်သည်ကုမ္ပဏီ DHL တို့ကဈေးနှုန်းများတက်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ DB မှထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်အရစွမ်းအင်စျေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကြောင့်9သည်ဒီဇင်ဘာလတွင်3၀ န်းကျင်တွင်လက်မှတ်ဈေးနှုန်းများကိုမြင့်တက်စေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ နယူး ...
နိုဝင်ဘာလ5@ 10: 00 - 11: 00
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - အကာအကွယ်ပေးထားသောအဆင့်ကိုဖြတ်ကူးခြင်း
နိုဝင်ဘာလ5@ 14: 00 - 15: 00
RayHaber 04.111.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
ကုန်သွယ်ရေးနည်းလမ်းသစ် USA သို့သမိုင်းဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်
Alarko သည်ရိုမေးနီးယားရှိ4ဘီလီယံပေါင်မီးရထားတင်ဒါရှုံးသည်
မေလ 2018 မှစ၍ Crimean တံတားမှ 8 သန်းပေါင်းများစွာယာဉ်များဖြတ်သန်းသွားသည်
၀ ယ်ယူခြင်းသတိပေးချက် - အကာအကွယ်အဆင့်ဖြတ်ကျော်မှုအတွက်စစ်ဆင်ရေးအရာရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ ယ်ယူခြင်း
ဓါတ်ရထား - မြေအောက်အရာတစ်ဦးကနှိပ်စက်ခံရသူသို့သော်မီနီဘတ်စ် Be မှ
high-speed ရထားလာနိုင်ဘူး, ဒါပေမယ့်ခဲ Gemlik ကုန်တင်ရထားအောက်မှာဒါGündoğdu'nunဥမင်လိုဏ်ခေါင်းလုပ်ဖို့
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Zama ဆွဲဆောင်မှုများ MI ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
Samsun အတွက်လာ MI အချိန်ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး?
TCDD နှင့် TCDD ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Inc ကခွဲထွက်ခဲ့ကြပေမယ့်စွန့်ခွာဖို့ဘယ်လို! (အထူးအစီရင်ခံစာ)
CHP Akçagöz, သင် Samsun ဓါတ်ရထားအတွက်တိုးမြှင့်ပြန်ယူနေ
ယနေ့သမိုင်းတွင် -2နိုဝင်ဘာ 1918 Lightning Armies Group
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (56) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (510) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (973) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)
Megane Sedan အတွက်မျိုးဆက်သစ်အင်ဂျင်များ
Star Wars အတွက် Porsche နှင့် Lucasfilm ဒီဇိုင်းအာကာသယာဉ်များ
မော်တော်ယာဉ်ကဏ္ S ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်မော်ရိုကိုတွင် Seger